ဟဒီးဆ်: အကြင်နာတရားရှိသူတို့အား “ရဟ်မာန်” မဟာကရုဏာတော်ရှင်က သနားကြင်နာတော်မူမည်ဖြစ်သည်။ မြေပထဝီပေါ်ရှိ သတ္တဝါအပေါင်းအား သနားကြင်နာကြလေကုန်၊ မိုးကောင်းကင်ပေါ်တွင်ရှိတော်မူသော အရှင်မြတ်က အသင်တို့အား သနားကြင်နာတော်မူပေမည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အကြင်နာတရားရှိသူတို့အား “ရဟ်မာန်” မဟာကရုဏာတော်ရှင်က သနားကြင်နာတော်မူမည်ဖြစ်သည်။ မြေပထဝီပေါ်ရှိ သတ္တဝါအပေါင်းအား သနားကြင်နာကြလေကုန်၊ မိုးကောင်းကင်ပေါ်တွင်ရှိတော်မူသော အရှင်မြတ်က အသင်တို့အား သနားကြင်နာတော်မူပေမည်။
အမျိုးအစား: အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အပေါ် အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း။ . အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ဂုဏ်တော် နာမတော်များကို ပိုင်ဆိုင်ရာ၌ တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူခြင်း။ .
အဗ္ဗဒွလ္လာဟ်ဗင်န်အမ်ရ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်။ အကြင်နာတရားရှိသူတို့အား “ရဟ်မာန်” မဟာကရုဏာတော်ရှင်က သနားကြင်နာတော်မူမည်ဖြစ်သည်။ မြေပထဝီပေါ်ရှိ သတ္တဝါအပေါင်းအား သနားကြင်နာကြလေကုန်၊ မိုးကောင်းကင်ပေါ်တွင်ရှိတော်မူသော အရှင်မြတ်က အသင်တို့အား သနားကြင်နာတော်မူပေမည်။
(အကြင်နာတရားရှိသူတို့)ဟူသည် လူသားနှင့် တိရစ္ဆာန် အပါအဝင် မြေပထဝီပေါ်ရှိသတ္တဝါတိုင်းအား သနားကြင်နာခြင်း၊ကောင်းကျိုးပြုခြင်း၊ စာနာစိတ်ဖြင့် ဆက်ဆံတတ်သူတို့ကို ဆိုလိုသည်။ (“ရဟ်မာန်”ကရုဏာတော်ရှင်က သနားကြင်နာတော်မူမည်။) “ရဟ်မာန်”ဟူသည် “ရဟ်မဟ်”ကရုဏာ ဟူသောပုဒ်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသြဝါဒတော်၏ အလိုသဘောမှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ၎င်းတို့အပေါ် ကောင်းကျိုးပြုပြီး မိမိ၏ကျေးဇူးတော်များကို ချီးမြှင့်တော်မူမည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ လုပ်ရပ် အမျိုးအစားနှင့်အညီ အစားရလဒ် ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။(မြေပထဝီပေါ် ရှိ သတ္တဝါအပေါင်းအား သနားကြင်နာကြလေကုန်)ဟူသည့် သြဝါဒတော်၌ ယေဘုယျအသုံးအနှုံးဖြင့် လာရှိထားသဖြင့်အဖန်ဆင်းခံ အမျိုးအစားအားလုံး ပါဝင်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် လူကောင်း၊လူဆိုး၊သားရဲတိရစ္ဆာန်နှင့် ငှက် စသည်တို့ အားလုံးအပေါ် သနားကရုဏာထားရမည်ဖြစ်သည်။ (မိုးကောင်းကင်ပေါ်တွင်ရှိတော်မူသော အရှင်မြတ်က အသင်တို့အား သနားကြင်နာတော်မူပေမည်။)၏ အလိုသဘောမှာ မိုးကောင်းကင်ပေါ်၌ ရှိတော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က အသင်တို့အား သနားကြင်နာတော်မူမည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ “မိုးကောင်းကင်ပေါ်တွင်ရှိတော်မူသော အရှင်မြတ်”ဟူသည့် အလိုသဘောကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ စိုးပိုင်မှုဟူ၍လည်းကောင်း၊ အခြားအဓိပ္ပါယ်များသို့လည်းကောင်း လွှဲပြောင်းဖွင့်ဆိုပိုင်ခွင့်မရှိပေ။ ဧကန်မုချ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မိမိ၏အဖန်ဆင်းခံများအားလုံးထက် မြင့်မားစွာ တည်ရှိနေတော်မူကြောင်းကို ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်တွင်လည်းကောင်း၊ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော်များတွင်လည်းကောင်း၊ “အိဂ်ျမာအ်” ပညာရှင်များအားလုံး တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် လည်းကောင်း အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုကြသည့် “အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မိုးကောင်းကင်တွင်ရှိတော်မူသည်။”ဟူသော စကား၏အဓိပ္ပါယ်မှာ မိုးကောင်းကင်သည် အရှင်မြတ်အား ပတ်လည်ဝိုင်းထားပြီး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ယင်းမိုးကောင်းကင်၏ အလယ်တွင် ရှိနေသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပေ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ထိုသို့ တည်ရှိခြင်းမှ ကင်းစင်၍ အလွန်မြင့်မြတ်တော်မူပေသည်။ စင်စစ် «في» “တွင်”၏ ဆိုလိုရင်းမှာ «على» “အပေါ် ”ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထိုစကား၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မိုးကောင်းကင်ထက်ဝယ် မိမိ၏အဖန်ဆင်းခံအားလုံးထက် မြင့်မားစွာ တည်ရှိတော်မူသည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ကရုဏာတော်အား ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်နှင့် ဟဒီးဆ်တော်အပေါ် လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ခြင်းနှင့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ တားမြစ်ချက်များကို ကျူးလွန်သည့်အတွက် လက်တုံ့ပြန်ခြင်းတို့သည် ကရုဏာနှင့် မဆန့်ကျင်ပေ။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မိုးကောင်းကင်ထက်ဝယ် မိမိ၏အဖန်ဆင်းခံအားလုံးထက် မြင့်မားစွာ တည်ရှိတော်မူသည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တွင် “မဟာကရုဏာ” တည်းဟူသော ဂုဏ်တော်ရှိကြောင်းအတည်ပြုထားသည်။